राशिफल – Khabaarpati
July 26, 2021 adminLeaveaComment on कस्तो छ तपाईको मंगलबारको भाग्य? साउन १२ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः पारीवरिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य प्रतिको लगनसिलताको कदर हुने समय रहेकोछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा अधिक समय बित्नेछ । ब्यपार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । मानसम्मान प्राप्तीको समेत योग रहेकोछ । बृषः मित्रजनहरुको अधिक सामिप्यता कष्टकर साबित रहनेछ । सामान्य पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नुपर्नेछ । […]
July 25, 2021 adminLeaveaComment on यस्तो छ तपाईको सोमबारको भाग्य, साउन ११ गतेको राशिफल हेर्नुभयो?
मेषः पुरानो लगानि उठाउन समयले बिशेष साथ दिनेछ । शुभ चिन्तकहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । आफन्तजनहरु सगँ टाढा भएको महसुस रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित हुनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछैन । बृषः गरीरहेको कार्यमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ […]
कस्तो होला तपाईको आइतबारको भाग्य! साउन १० गते आइतवारको राशिफल हेर्नुहोस्
July 24, 2021 adminLeaveaComment on कस्तो होला तपाईको आइतबारको भाग्य! साउन १० गते आइतवारको राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु सफल हुनेछन । यात्राको योग रहेको छ । आटेका कार्यमा कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । बृषः निरन्तर भइरहेका कार्यबाट लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुसिको लागी […]
July 23, 2021 adminLeaveaComment on कस्तो रहला तपाईको शनिबार को भाग्य! साउन ९ गते शनिबारको राशीफल हेर्नुहोस्
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) अस्वस्थताका बाबजुद कामको दायित्व बढ्नेछ । सानातिना काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । हुलमुलमा धनमाल हराउन सक्छ । साथीभाइको सहयोग जुटाउन प्रयत्न गर्नुहोला । मनोरञ्जनमा अलमलिनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न विलम्ब हुनेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) समयमा होसियार बन्न नसक्दा काममा बाधा हुने र खर्च बढ्ने देखिन्छ । […]
कस्तो रहला तपाईको शुक्रबारको भाग्य? साउन ८ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
July 22, 2021 adminLeaveaComment on कस्तो रहला तपाईको शुक्रबारको भाग्य? साउन ८ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । सानो प्रयासले नै काम बन्नेछ। आम्दानी मनग्य भए पनि आकस्मिक खर्चले धन संग्रहमा बाधा पुग्नेछ। आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। पछिका लागि कर्मफल सञ्चय गर्ने समय छ। मेहनतले अवसर दिलाउनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ। बृषः परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा अझ राम्रो […]
July 21, 2021 adminLeaveaComment on पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण ६ गते बुधबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
कस्तो रहला तपाईको बुधबारको भाग्य? साउन ६ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
July 20, 2021 adminLeaveaComment on कस्तो रहला तपाईको बुधबारको भाग्य? साउन ६ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः नयाँ कामको प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ भने सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् । कमजोरी सुधार गर्दै फाइदा उठाउने समय छ । बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ । निर्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ । परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दुस्ख पाइनेछ । बृषः सुरुमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ । फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला । […]
July 20, 2021 adminLeaveaComment on मंगलबार ग्रहचक्रमा ठूलो परिवर्तन, सबै राशिलाई असर ! कुन राशिलाई कस्तो ?
एजेन्सी – ग्रहहरुको सेनापति मंगल ग्रहले मंगलबार राशि परिवर्तन गर्दैछ। मंगलबार साँझ ६ बजेर ३४ मिनेट पश्चात मंगल कर्कट राशिबाट सिंह राशिमा गोचर गर्नेछ। मंगलले गर्ने उक्त राशि परिवर्तनले सम्पूर्ण राशिमा प्रभाव पार्नेछ ।कुन राशिलाई कस्तो ? मेष राशि- मंगलको राशि परिवर्तन मेष राशि हुनेहरुका लागि नोक्सानदयाक रहने देखिन्छ। दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहेका कारण […]
July 19, 2021 adminLeaveaComment on कस्तो रहला तपाईको मंगलबारको भाग्य? साउन ५ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँकार्य थालनिको योग रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । ब्यपार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । अधुराकार्यहरु सुचारु गर्न समयले बिशेष साथ दिनेछ । बृषः खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । […]
साउनको पहिलो सोमबार कस्तो रहला तपाईको भाग्य? साउन ४ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
July 18, 2021 adminLeaveaComment on साउनको पहिलो सोमबार कस्तो रहला तपाईको भाग्य? साउन ४ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मेष – खर्च लागे पनि अहिलेको मेहनतले पछिलाई फाइदा हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि आफ्नो स्थान सबल बनाउन सकिनेछ । रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला । पहिलेका प्रतिस्पर्धीले समेत सहयोग तथा सहकार्यका हात अघि बढाउनेछन् । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तत्कालको फाइदाभन्दा भविष्यको मुनाफा उच्च हुने देखिन्छ । बृष – मेहनत गर्दा आम्दानीका […]